ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ အရင်တုန်းကလို ဘေးနားမှာမရှိနိုင်တော့တဲ့ မိခင်ကြီးကြောင့် ဝမ်းနည်းနေရတဲ့ ဂွမ်းပုံ – Suehninsi
ယနေ့ ဩဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့လေးကတော့ သရုပ်ဆောင် ဂွမ်းပုံရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းထက်မှာ အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဂွမ်းပုံကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားအတော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ကိုင်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့
မလိုက်အောင် နုပျိုလွန်းတဲ့ သူမကို ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂွမ်းပုံက ယနေ့ကျရောက်တဲ့ သူမရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့ မတူပဲ မိခင်နဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခွင့်မရတော့တာကြောင့် ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ
ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ လပိုင်းအချိန်လောက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီး ယနေ့မွေးနေ့လေးမှာတော့ အရင်နှစ်က မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို တင်​ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂွမ်းပုံက မွေးနေ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာရင်း ” ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို
“ချစ်မေမေနဲ့အတူ”ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်နော် ဒီနှစ်.. မေမေ့. သမီးရဲ့မွေးနေ့…(31.8.2020) ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာရေးသားလာတာဖြစ်လို့ ချစ်ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကဲ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သရုပ်ဆောင် ဂွမ်းပုံကို မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေး ပြောပေးခဲ့ကြဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်….။
ယနေ့ ဩဂုတျလ ၃၁ရကျနလေ့ေးကတော့ သရုပျဆောငျ ဂှမျးပုံရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးထကျမှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာနဲ့ လြှောကျလှမျးနတေဲ့ ဂှမျးပုံကတော့ ဗီဒီယိုဇာတျကားအတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ယနတေို့ငျ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို လုပျကိုငျနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ အသကျအရှယျနဲ့
မလိုကျအောငျ နုပြိုလှနျးတဲ့ သူမကို ပရိသတျတှကေ တဈခဲနကျအားပေးခဈြခငျနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဂှမျးပုံက ယနကေ့ရြောကျတဲ့ သူမရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးမှာ ခါတိုငျးနှဈတှနေဲ့ မတူပဲ မိခငျနဲ့အတူ ဖွတျသနျးခှငျ့မရတော့တာကွောငျ့ ဝမျးနညျး စိတျမကောငျးဖွဈနတောပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ မိခငျဖွဈသူ
ကှယျလှနျသှားခဲ့တာ လပိုငျးအခြိနျလောကျရှိပွီးဖွဈပွီး ယနမှေ့ေးနလေ့ေးမှာတော့ အရငျနှဈက မိသားစုနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဂှမျးပုံက မှေးနေ့ အမှတျတရပုံလေးတှကေို တငျပေးလာရငျး ” ပြျောရှငျဖှယျရာမှေးနပေ့ေါငျးမြားစှာကို
“ခဈြမမေနေဲ့အတူ”ဖွတျသနျးခဲ့ကွတယျနျော ဒီနှဈ.. မမေေ့. သမီးရဲ့မှေးနေ့…(31.8.2020) ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ဝမျးနညျးကွကှေဲစှာရေးသားလာတာဖွဈလို့ ခဈြပရိသတျတှကွေညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။ ကဲ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး သရုပျဆောငျ ဂှမျးပုံကို မှေးနဆေု့တောငျးစကားလေး ပွောပေးခဲ့ကွဖို့ မမလေို့ကျပါနဲ့နျော….။
Source : Goon Sein’s Faebook